याद गर्नुभएको छ, औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ! – Ujyaalo Patrika
यो पनि – यो हो संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक, जसको चौडाई २६ लेन छ !
काठमाडौं । नेपालमा सडक फराकिलो बनाउने अभियान चलिरहेकै सन्दर्भमा संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडकको बारेमा समाचार प्रकाशित भएको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित द क्याटी फ्रि वे संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक मानिएको छ ।
यो पनि – अचम्मको कानून, जहाँ बहिनीको बिहेमा रोएको भन्दै दाजुलाई गरियो का रबाही!
एजेन्सी। बर्षौं आफूले हुर्काएको छोरीचेली पराई घरमा बिदा गर्दा पक्कै पनि जो सुकै अभिभाबकलाई नमज्जा लाग्छ, आँशु रोक्न कठिन हुन्छ । उनीहरु आफ्नो दुखलाई आँशुसंगै पखाल्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर विश्वमा यस्तो देश पनि छ जहाँ चेली अन्माउँदा रोएको भन्दै माइतीलाई का रबाही भएको छ ।
रुसको चेचेन्या भन्ने स्थानमा बहिनीलाई अन्माउँदा रोएको भन्दै उनका दाजुलाई का रबाहीसहित सजाय दिइएको छ । बहिनीको बिवाहमा मन थाम्न नसकेर रुएको अ भियोगमा ती बहिनीका दाजुलाई सार्वजनिक रुपमा माफी मगाईं स जाय दिइएको हो ।
एक साता अघि एक भाइरल भिडियोमा बहिनीको बिवाहको अन्तिम समयमा दाजु रोएको देखेपछि माफी मगाइएको थियो । खासमा रुसको चेचेन्यामा विवाहमा रुनु त्यहाँको परम्परा विपरित मानिन्छ ।
चेचेन्याका स्थानीयले भाइरल भिडियोमा दाजु रोएको देखेपछि त्यस उपर कारबाहीको माग गरेका थिए । उनीहरुको मागपछि त्यस बिषयमा ठूलो विवाद भयो । अन्ततः स्थानीय धार्मिक नेताले उनलाई रोएकोमा माफी माग्नु पर्ने आदेश सुनाए ।
चेचेन्यामा हुने विवाहको अर्को अचम्मको कुरा के छ भने बहिनीको बिहेमा दाजु जान पाउँदैनन् । यदि गए उनलाई पनि कारवाही हुन्छ ।
Previous यौ’ न संग्रहालयमा खिचिएको फोटो शेयर गर्दा यी मोडेललाई जानु पर्ने भयो जेल , फोटोमा के थियो त्यस्तो ?
Next अध्यादेश जारी गर्न अलमल गरेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव